Posted by Tranquillus | Jan 19, 2021 | Shabakada
Asalka "habka Agile" ...
Adduunku wuxuu ku leeyahay "habka agile" koox ka mid ah saynisyahannada kombuyuutarrada Mareykanka. Si wada jir ah, waxay go'aansadeen 2001 inay kacaan ka sameeyaan geedi socodka horumarinta IT-ga waxayna qoreen "Agile Manifesto"; hab shaqo oo udub dhexaad u ah qanacsanaanta macaamilka, kaas oo lagu qaabeeyey afar qiyam iyo 12 mabda ', sida soo socota:
Dadka iyo isdhexgalka ka badan geedi socodka iyo qalabka; Software-ka hawlgalka oo ka badan dukumiintiyada dhammaystiran; Wadashaqeynta macaamiisha in kabadan gorgortanka qandaraaska; La qabsiga beddelka in ka badan raacitaanka qorshaha.
12ka mabda '
Ku qanciya macaamilka adoo si deg deg ah oo joogto ah u keenaya astaamo qiimo sare leh; Soo dhaweynta codsiyada isbeddelka xitaa goor dambe ee horumarinta wax soo saarka; Had iyo jeer sida ugu macquulsan, u soo gudbi softiweerka hawlgalka oo leh wareegyo toddobaadyo ah, adigoo doorbidaya waqtiyada ugu yar ee la qaban karo; Hubi iskaashi joogto ah oo ka dhexeeya daneeyayaasha iyo kooxda wax soo saarka; Inay la fuliyaan mashaariic dad dhiirigelin leh, u fidiya bay'ada iyo taageerada ay u baahan yihiin kuna aaminaan si ay u gaaraan ujeeddooyinka loo dejiyey; Fududee
Maareynta Agile… Jawaabta degdegga ah ee dhibaatada, mise qaab waara? Janaayo 20th, 2021Tranquillus
READ Heshiisyada wadajirka ah: si loo xisaabiyo gunnada sannadlaha ah ee dammaanad qaadka ah, miyaad tixgelisaa isku-dheellitirka saxda ah?
horeKu dhawaaqida go'aan aan la jecleysan: maxaa la sameeyaa?
socda2021 gunno tababar